Search blog/review by date range:
किरण विक - कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मार्यो भन्ने रहस्यको उद्घाटन एक्कासी झट्का दिने गरि देखाइएको छैन। त्यो जवाफ विस्तारै मिल्छ। रहस्य बताउन अति नाटकीयताको सहारा लिएका छैनन् निर्देशकले।यसमा निर्देशकको कथावाचन शैलीका हिसाबले अब्बल मान्न सकिन्छ। हो, दर्शकलाई उत्सुकता छ एउटा चिजको तर, प्रस्तुति छ अर्कै चिजको। र पनि यस्तो बेजोड संगम छ कि, त्यहाँ खालीपनको महसुस नै हुँदैन।
‘मैले कपिल शर्माको कार्यक्रम हेर्नै छोडिदिएँ’
एजेन्सी , मुम्बई, वैशाख १७ - उनले कार्यक्रमका केही प्रोमो भने आफूले हेरेको बताएका छन्। ‘धेरै पछि आएर मलाई के थाहा भयो भने यो मेरो कार्यक्रम होइन’, सुनिलले भने। उनले आफू कपिल शर्मा सोमा फर्कने विषयमा कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको बताए।
उज्ज्वल प्रसाईं - ‘हजार चौरासी की मा’ जस्ता केही सिनेमा हेरेपछि लाग्यो, सजिलो सूत्रमा जीवनलाई ढाल्ने उपक्रमले मनोरञ्जनसम्म दिन सक्छ। त्यसले सामान्य मानिसहरुमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ र बजार विस्तारलाई सघाउन पनि सक्छ। तर, दर्शकहरुको सोच्न सक्ने क्षमतालाई दोहन गर्न भने सक्दैन किनभने त्यस्ता सुत्रबद्ध सिनेमामा खासै सोच्नुपर्ने ठाउँ नै हुँदैन। एकै झलकमा सर्लक्क देखिने भित्ताको सपाट चित्र जस्तो मात्र हुँदो रहेछ सजिला सूत्रमा उनिएका सिनेमाहरु।
निष्प्रभ सजी - पसिना, आँसु र रगत यी सबै पानी हुन्, जीवनका छिद्रहरूबाट रसाउने पानी। रजस्वलाको रङ पनि रातो नभइदिएको भए, स्वीकार्य हुने थियो होला सायद हामीलाई। रङहिन पानीलाई त हामीले स्वीकारिरहेकै छौँ। कोठा, आँगन, पिँढी जताततै बगे पनि। त्यो दुर्गन्ध भन्दा किन दुर्गन्धित भयो रजस्वला? हामीलाई किन त्यति नै खेर मन नपरेको रातो रङ। अरु बेला त हामीलाई रातैले ढाकिनुपर्छ। ब्रम्हाजी यदि तिमीले नै बनाएका हौ यो सृष्टी भने, मेरो पनि एउटा अनुरोध छ। पुरुषको विर्यको रङ पनि रातै बनाइदेउ न है!
कुमारी लामा - द पियानो टिचर एउटी अधबैंसे अविवाहित पियानो प्रोफेसर इरिकाको कथा हो। उनी भिएना कन्सर्भेटरीमा पियानो सिकाउँछिन्। नाम छ, दाम छ तर फेरि पनि उनी एक्ली छिन्। हलचल गर्न नदिने एकदमै डोमिनेटिङ आमासँग बस्छिन्। उनीभित्र यौन कुण्ठाको अग्लो चाङ छ। उनी आफूलाई यौन आनन्द दिने माध्यम खोज्छिन्। त्यसमा पर्छ सेक्स सप र त्यहाँका भिडियोहरु। उनी हेरेर चित्त बुझाउँछिन्।
सुरज सुवेदी - उसले भनेको आधा मिल्यो। थिएटर मलमा अलिक छिटै पुगेँ। त्यहाँ राखिएका दीपेन्द्र बज्राचार्यका जनआन्दोलनका फोटो र न्युज कटिङहरू हेरेँ। ऊबेला कभर भएका आन्दोलनका समाचार र अन्तर्वार्ताहरूले साँच्चै पुरानो समयमा लिएर गए। 'ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट' समय। एउटा फोटोमा आँखा गयो। बाटोभर चप्पलहरू छरिएका रहेछन्। कहाँ फ्याँकिए होलान् ती चप्पलहरू? धोबीखोलामा कतैकतै देखिने चप्पलहरु तिनै त हैनन्? ती चप्पल, जसका हुन् उनीहरूलाई कस्तो लाग्दो हो अहिले?
लभ लभ लभ: दर्शकको मन छुने कथा
अशेष अधिकारी - सुरजभित्र सम्बृद्धिप्रति गुम्सिरहेको प्रेम एक दिन व्यक्त हुन्छ। सुरूमा सम्बृद्धिले उसको प्रेम अस्विकार गर्छे। सुरज रून्छ। उसले एक मौका माग्छ। सम्बृद्धिले उसलाई १२ दिन भित्र केहि यस्तो गर्न भन्छे जसका कारण सुरजले उसलाई विदेश जानबाट रोक्न सकोस्। सुरज तयार हुन्छ। त्यसपछि सम्बृद्धिलाई पाउन सुरजले के, के गर्छ? त्यो नै 'लभ लभ लभ'को कथा हो।
ठमेल, टाटु र अन्तराष्ट्रिय टाटु दिवस
प्रभास देवकोटा - वर्तमान पुस्ताको यो रुचीलाई म समकालिन साहित्यसंग तुलना गर्छु। दुवै एकै हुन्। मान्छे मुखरीत हुन चाहन्छ। यो उसको प्राणी मात्रमा विशेष हुनको परिचायक हो, र यही परिचयको खोजीमा टाटु एउटा भावनाको र सन्देशको सम्प्रेशण अभिव्यक्ति हो। जसरी कलाकारितामा, घनत्व, वर्गीय,लैंगिक, बञ्चितिकरण,फेमिनिष्ट, वर्ग, जातको प्रयोग भयो त्यस्तै यसमा पनि विभिन्न प्रयोगात्मक प्रयोगहरु भैरहेको सन्दर्भ यर्थाथ हो।
विप्लव ढकाल - पृथ्वीनारायणले बिसेको घर पनि हेरूँ र सल्लाह पनि गरूँ भनेर आफू आएको कुरा बताएपछि उसले ‘जाबो दमाईँसँग सल्लाह गर्नुपर्ने के कुरो त ख्वामित्?’ भन्ने प्रश्न गरेको छ। राजाले सल्लाह जातले नभएर अनुभव र बुद्धिले दिने कुरा सम्झाउँदै ऊ आफ्नो घरको पुरानो नगर्ची भएको, आफ्नो काठोभोटो पनि उसैले गरेको र गाउँघरलाई सल्लाह दिन ऊ निकै सिपालु भएको कुरा सुनेर आफू उसको घरमा आएको कुरा बताउँदा बिसेले ‘आ ख्वामित्, पढ्या छैन, मुर्ख दमैको छोरोले के सल्ला दिन्थेँ नाइँ’ भनेर लाचारी प्रकट गरेको छ।
... त्यसपछि, म कहिल्यै सुध्रिइनँ!
मनोज पण्डित - वास्तवमै उहाँको सिद्धान्तअनुसार म त्यसै दिनबाट यसरी बिग्रन थालेँ, जीवनभर सुध्रन सकिनँ। मलाई झलझली ती रगतका थोपाहरु मेरै अनुहारमा पोतिएझैं भैरह्यो र म धेरैचोटी भक्कानिइरहेँ। भेडाको सम्झनामा मैले बुवालाई भेडाको पाठो ल्याइदिन कर गर्न थालेँ। बुवाले मेरा लागि रंगीचंगी लामकाने बाख्राको पाठो ल्याइदिनुभयो। मैले त्यो फिल्ममाझैं पाठालाई हुर्काएँ। धेरैचोटी चुप्पा खाएँ। मैले अठोट लिएको थिएँ, म यो पाठोलाई कसाईको नजरबाट सधैंभरी जोगाएर राख्छु।
दिल्लीको सार्क साहित्य उत्सव र बाबियोको डोरी
धिरज राई - गत फेब्रुअरी २४, २५ र २६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको सार्क साहित्य उत्सवको अन्तिम दिन बिहान होटलबाट कार्यक्रम स्थल जाँदै गर्दा बङ्गलादेशी कवि शाफिनुर शाफिनले भनिन्, 'तिमीहरुका कविता मलाई धेरै मन पर्‍यो। नेपाली कविताको स्तर निक्कै माथि रहेछ। तिमीहरुको मौलिक लेखनशैलीले मलाई ज्यादै प्रभाव पार्‍यो।'
नारीले आफू हुनुको बोधसमेत गर्न नपाउने?
पवित्रा लामा - एक गृहिणी, एक समर्पित आमा हुनु उसको एकातिर सबलता पनि हो तर उतिकै दुर्बलता पनि हो। एक कामकाजी महिलाले पनि साधारण घरेलु स्त्रीसरह ती तमाम कार्यहरू त गर्नैपर्ने हुन्छ, जो एक स्त्रीले आजसम्म गर्दै आइरहेकी छ र भोलि पनि गर्नैपर्ने उसको नियति देखिन्छ। यसबाहेक स्वत्वबोध र केही हुनुको परिचयको सङ्कटसित जुध्दै ऊ घरबाहिर पनि उत्तिकै खटिन्छे, कमाउँछे, घर चलाउन बराबरको योगदान दिन्छे, छोरा-छोरीको भविष्य निर्माणको निम्ति बलियो जग तयार गर्छे, परिवारको आर्थिक स्तर सुधार गर्नमा सहयोग गर्छे।
किताबः न कसैको मित्र, न त कसैको शत्रु!
विक्रम थापा - मार्लोन जेम्स लिखित पुस्तक बब मार्लेको हत्या वरपर खेलेको छ। यस हत्यासँग सम्बन्धित पात्रहरू (नियोजित र प्रायोजित) को जीवन उत्थान, संघर्ष र यसले निम्त्याएको नयाँ धारको संकलित पुस्तक हो। जमैकामा अवस्थित ग्याङ, वार र यसबाट निर्देशित सरकार लगायत ‘सल्म’ जीवन, कलमभन्दा पिस्तोल सजिलो उपलब्ध हुने संसार काल्पनिक लागे पनि कुनै–कुनैको सत्य हो।
'सुन साँइली' भित्रको नेपाली समाज र यसको विन्यास
प्रभास देवकोटा - 'सुन साँइली' वर्तमानको तितो यथार्थता हो। यसमा विश्व श्रम बजारमा व्याप्त नेपाली समाजको सामुहिक जिवन भोगाइको बैयक्तीककरण छ। 'सुन साँइली' गीतले मन र हृदय, मुटु र दिमाग एकै पटक हल्लाउँछ। त्यसमा कुनै शंका छैन्, तर यस्तो हल्लाई यो मात्रै होइन। समयक्रममा थुप्रै यस्ता अरु गीतहरु बन्ने र तिनले निश्रृती पाउने पक्का छ। कारण हाम्रो नेपाली समाजको समाजशास्त्र गरिवी, अज्ञानता, अशिक्षा, बेरोजगारी र पछौटेपन हो। यो नसकिंदासम्म 'सुन साँइली'हरु जन्मिरहन्छन्।
रंगमञ्चका लागि ठाउँ बनाउ: मेरा आजका अन्तिम शब्दहरु यही हुन्
ईजाबेल हुपर्ट - मैले सँगै काम गरेका एकजना पहिलेका मञ्च निर्देशकलाई सम्झिन्छु जो रातको पर्दा उठाउनुअघि दृढताकासाथ ठूलो स्वरले खुलेर कराउँथे, “रगंमञ्चका लागि ठाँउ“ बनाउ। मेरा आजका अन्तिम शब्दहरु पनि यहि हुन्।
बाउको मुहार देश जत्तिकै प्यारो र सम्मानित हुन्छ कि हुँदैन?
सीमा आभास - हामी आमाको अनुहारमा देश देख्छौँ। देशको नक्सामा आमाको अनुहार देख्छौँ। बाउको अनुहारमा आमा कति देख्छौँ? बाउको अनुहारमा देशको नक्सा कस्तो देख्छौँ? या देशको नक्सामा बाउको अनुहार कस्तो देख्छौँ? आमाको चित्रमा देश देखिन्छ भनिरहँदा बाउको चित्रमा देखिएको देशको मुहार कस्तो बन्दो हो? बाउको मुहार देश जत्तिकै प्यारो र सम्मानित हुन्छ कि हुँदैन?
लू: बलियो कथा, कमजोर नाटक
- सुरज सुवेदी - सुनिरहेका केही वाक्य उनले बोले। ‘नाटक राम्रो लागेपनि वा नलागेपनि अरुलाई हेर्न जान भन्नुस्। हामीलाई नाटक हेर्ने मान्छे चाहिएको छ।’ एक निर्माताको हिसावमा उनको भनाई स्वाभाविक हो तर एक नाट्यकर्मको हिसावमा कस्तो हो? मैले पछिल्ला वर्षहरुमा हेरेका लगभग सबै नाटक सुरु हुनुअघि पहिला भनिने वाक्यहरु सम्झिएँ। सबैले भन्थे, ‘नाटक राम्रो लागे अरुलाई भन्नस्। नराम्रो लागे हामीलाई भन्नुस्।’ यसपटक नाटक हेरेर फर्किँदा यी वाक्यांशहरु पनि शंकालु लागे। यो नाटक राम्रो बनाएका छौं भन्ने आत्मविश्वास हो कि नाटक बनाउन सकेका छैनौं भन्ने लाचारी?
टंक चौलागाँई - सन्तान वृद्धि नहुनु एउटा सकस! असल सन्तान नहुनु अर्काे सकस! असल सन्तानको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै अरु धेरै बुबाआमाहरुको सकसको साक्षी बस्नु झन् ठुलो सकस! ईश्वरले पठाउनु भएको सन्तान र साहित्यिक सन्तानको स्याहारमा जुटेको छु। सन्तान विहिन हुनुभएका हाम्रा बुबाआमाहरुमा प्रेम!
मनप्रसाद सुब्बा - आफ्नी आत्मीय टाढिएर मनभरि फैलिएको रिक्तता र त्यसैमा सनन्न बजिरहेको संवादहीनता नै कविताको क्यान्भास छ जसमाथि कवि आफ्नो विगत र वर्त्तमानका विविध अनुभूतिहरूलाई विशेष-विशेष रङ्ग र रूप दिई यौटा कोलाज निर्माण गर्छन् र नाम दिन्छन् – ‘निःशब्द’।
राजेन्द्र महर्जन - ब्राह्मण चिन्तनमा सन्देह, प्रश्न र आलोचनालाई कुनै स्थान छैन, बरु निषेध नै छ। विश्वास, भक्ति, पूजा–अर्चना यससँग गाँसिएका धर्ममा त छँदैछ, त्यससँग जोडिएको बौद्धिक चिन्तनमा पनि छ। एक प्रख्यात ब्राह्मण चिन्तक याज्ञवल्क्यले उनको विचार र मतमाथि प्रश्न गर्ने समकालीन विदूषी गार्गीलाई दिएको धम्की धेरैको कानमा गुञ्जिरहेको हुनुपर्छ। त्यस धम्कीले ब्राह्मण चिन्तनमा रहेको प्रश्नविरोधी प्रवृत्तिलाई उजागर गर्दछ र सन्देह–प्रश्न–आलोचनालाई सयौं वर्षसम्म निषेध गरिएको तथ्य उद्घाटन गर्दछ।
काठमाडौंमा नेपाली मुन्ना
नवीन विभास - एउटा मुन्ना काठमाडौँमा छु। घामपानी ओतेका काठमाडौं र घोराहीका डेरा आँखामा फर्कन्छन्। कति नुर छन्/थिए होलान् ती डेरामा? नुर ताँती लाग्छन्। कति नुरका रहर र सपनाले आत्महत्या गरे होलान् हँ? गाउँका कति गुमनाम होलान्?
अशेष अधिकारी - वर्षकै सर्वाधिक प्रतिक्षित बनेको फिल्मको कथा देशमा गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दी छ। नाकाबन्दीमा पेट्रोल,डिजेल, मट्टीतेल र ग्यासको अभावले काठमाडौं सिथिल छ। विनाशकारी भूकम्पले थिल्थिलिएको देशमा नाकाबन्दीसँगै पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी मौलाएको छ, त्यसमै मौलाएको छ 'हाकु काले' (सौगात मल्ल)को कालो कारोबार। भूकम्पको मौकामा जेलबाट भागेका नरे (कर्मा), गोफ्ले (दयाहाङ),पाण्डे (सुशिल राज पाण्डे), देवेन (प्रतिक राज न्यौपाने) आफूलाई फासाउने हाकुलाई बदला लिन दिनरात खोजिरहेका छन्।
मेरो आमाको नाम
सरस्वती प्रतीक्षा - प्रत्येक घरकी आमा एउटा परिवार मात्र अड्याएर बस्दिन, एउटा ब्रम्हाण्ड अड्याएर बसेकी हुन्छे। सबैलाई नाम दिएकी हुन्छे। जब कि, उसको आफ्नो नाम तिनै नामहरुको भीडमा कतै कच्याककुचुक भएर बसेको हुन्छ। सबैको ख्याल गर्छे। जब कि, उसले आफूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने सत्यसमेत भुलेकी हुन्छे।
गुरुङ सुशान्त - त्यो राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरहरुको युग थियो। पोस्टर साइजमा मैले पनि कुनै केटीलाई मनको भित्तामा करिश्मा बनाई सजाइसकेको थिएँ। त्यसैले हलमा गइरहनु र आफूलाई हिरोमा आरोपित गर्नु धारावाहिक तालिका थियो मेरो। म पनि सिल्भियाको पछिपछि कुदिरहेछु। आशा छ–एक दिन सिल्भियाले मलाई भन्नेछिन्, ‘तिम्रो सिल्भिया म नै हुँ।’ त्यसपछि म फिल्म दोहा¥याएर हेर्ने छैन।
लुइस बुनेलको ‘एन्टिडोट’
शेखर खरेल - अर्को कुरा उनका फिल्म रेलको लिकजस्तै सीधा धर्काका हिँड्दैनन्, ती माकुराका जालाझैं वा हाम्रै कवि मोहन कोइरालाका झैं फर्सीका जराजस्ता जेलिएका हुन्छन्। तर, जटिल विषयवस्तुलाई पनि सुरूचिपूर्ण अनि कौतुकमय प्रस्तुति दिन सक्नु नै बुनेलको विशेषता हो। बुनेलका फिल्ममा ‘बोर’ शब्द सायद वर्जित छ।
हिउँ परिरहेको साँझ
चन्द्र गुरुङ - एक पटक जाडोको समयमा फ्रस्ट न्यू हेम्सशियरको मार्केटबाट घर आउँदै थिए। त्यो वर्षको क्रिसमसमा बच्चाहरुलाई उपहार किनिदिन फ्रस्टसित पैसा अपुग भएछ। फर्किंदै गर्दा एउटा घुम्तीमा पुगेर आफ्नो विवशतामाथि फ्रस्ट रुन थालेछन्। हो, यही घटनापछि फ्रस्टले जीवनमा थुप्रै सपनाहरुलाई साकार पर्ने अठोट गरेछन्। त्यस साँझको अनुभवलाई उनले भुल्न चाहेर पनि भुल्न सकेनन् र कविताको रुपमा उतार्ने निधो गरे।